လိုချင်၊ဖြစ်ချင်၊ရချင်မှုများ၊ငြိမ်းလိုငြား | မူလဓမ္မ ဆရာတော် ဦးဝိဇယ
November 23, 2009	ဓမ္မဓရ===တရားသဘော တွေ၏ အလွန့် အလွန် သိမ်မွေ့နက်နဲကြောင်းကို ဤနည်း(၄)ပါး နာကြားရတဲ့အခါ တပည့်တော် သဘောပေါက်လာပါတယ်။ နားလည် သဘောပေါက် အောင် မနာကြားဘဲနဲ့ နာကြားနိုင်တဲ့ နားမရှိဘဲနဲ့ တရားအားထုတ် လို့မရပါဘူး။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် စွဲနေမှန်းမသိသေးတဲ့ အစွဲတွေ အများကြီး ရှိနေသေးတော့ ငါသိ ငါတတ်လုပ် သူတွေ အတွက် အမှန်တရားနဲ့ အလွန်ဝေးကွာနေပါတယ်။ ဆုံးမစရာရှိရင် တပည့်တော် ကို အားမနာတမ်း ဆုံးမပါဘုရား။ တပည့်တော် လိုက်နာ ဘို့ အသင့်ပါဘုရား။
အတွေးလုံးဝမပါပဲ ပျက်နေတယ် အေးအေးဆေးဆေး ရွတ်နေတာ သီလနဲ့ သမာဓိ မြဲစေပါတယ်.. သိရုံသိနေတဲ့စိတ်ကလဲ ဘာဝနာကို ပွားစေပါတယ်… စိတ်ကို အလွန်ငြိမ်းချမ်းစေလို့ တရားထိုင်နေတာနဲ့ အတူတူပါပဲ… ဆရာတော် ကျန်းမာပါစေ…
Reply	nan aye san thar permalink
Thank you for this side. I can not write Burmese.Thus I am sorry.
« အဝိဇ္ဇာ – ကိုနယ်လေးပါး၊ နည်းလေးပါးဖြင့် ပိုင်းခြားခြင်း
ပဋိစ္စ သမုပ္ပါဒ် ===ဧဝံ ဓမ္မတာနည်း »